रुपन्देही । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका मुर्गियामा जिपको ठक्करबाट आज (शुक्रबार) बिहान एक साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार बिहान करिब पाँच बजे भएको दुर्घटनामा स...
काठमाडौं । आज विश्व योग दिवस । 'मुटुका लागि योग' भन्ने नाराका साथ विश्वभर मनाइदै छ । हरेक वर्षको २१ जुनमा विश्व योग दिवस मनाइन्छ । भारतको नेतृत्वमा सुरुवात गरिएको योग दिवस मनाउने अभियानलाई संयुक्त र...
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत खाद्य अनुगमन तथा परीक्षणका लागि चारवटा मोबाइल भ्यान प्रयोगशाला खरिद गर्दा २४ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ । सम्झौताभन्दा कमसल प्रयोगशाला खरिद गरेर भ्रष...
रसुवागढी सुरुङमा थुनिएका १७ कामदारको सकुशल उद्धार
रसुवा । सदरमुकाम धुन्चे देखि करिब २८ किलोमिटर उत्तरमा रहेको रसुवागढीमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा अलपत्र परेका १७ कामदार सुरुङभित्र सुरक्षित उद्धार गरिएको छ । गएराति साढे ...
नेकपाका सांसद दुई ध्रुवमा विभाजित
गुठी विद्येयक विवादित बनेपछि सत्तारुढ दलका नेकपाका सांसद दुई ध्रुवमा विभाजित भए । काठमाडौँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र नेता विद्येयक फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए, काठमाडौँ बाहिर खासगरी पश्चिम क्षेत...
‘पशुपतिको मूल ढुकुटी खोल्नुपर्‍यो। यसलाई बन्द गरी राख्नुभएन’, सांसद खिमलाल भट्टराईले भने, ‘यसभित्र के छ ? भएको सम्पत्ति सबै खरानी भयो कि बाँकी छ ? हेरौं त ।’ राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्...
मनसुन भित्रियो, धान रोपाइँ गर्ने किसानहरू खुशी
यस वर्षको मनसुन बिहीबारदेखि नेपाल भित्रिएको छ । नेपालको पूर्वी क्षेत्र हुँदै मनसुन भित्रिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक सरजुकुमार वैद्यले जानकारी दिए । विभागअन्तर्गत रहेको मौसम पूर्वानुम...
चीन भन्छ, ‘रेलका लागि नेपालको तयारी पुगेन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो रेलवे कनेक्टिभिटीमा जोड दिए पनि चिनियाँ पक्षले नेपालले गर्नुपर्ने न्यूनतम तयारीसमेत नगरेको बताएको छ । बेइजिङमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल–चीन रेलवेसम्बन्धी चौथो ...
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द्र (विप्लव) समूह र प्रहरीको दोहोरो भिडन्त भएको छ । प्रहरी र विप्लव समूहको दोहोरो भिडन्तमाा परि विप्लव समूहका जिल्ला इन्चार्जको मृत्यु भएको छ । प्रहरीको गोली प्रहारबाट विप्...
सुन्दरीजलबाट रत्नपार्क आउँदै गरेको बस दुर्घटना
काठमाडौं । सुन्दरीजलबाट रत्नपार्क आउँदै गरेको बस दुर्घटनामा परेको छ । बिहिबार दिउँसो सुन्दरीजलबाट रत्नपार्क आउँदै गरेको बस गोकर्णमा दुर्घटनामा परेको हो । रमचम चोकमा बा १ ख ८७४४ नम्बरको बस दुर्घटनामा...
निर्मला हत्या प्रकरण: बयानका क्रममा यातना दिएको भन्दै प्रहरी विरुद्ध उजुरी
काठमाडौं । गत साउन १० गते बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको घटना फेरी चर्चामा आएको छ । निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेको बेला प्रहरीले...
दुई बन्दुक सहित दुई जना पक्राउ
भोजपुर । दुई बन्दुक सहित दुई जना पक्राउ परेका छन । पक्राउ पर्नेमा भोजपुर नगरपालिका ३ बाट सोही ठाउँ बस्नेहरु ४६ वर्षीय जित कुमार राई र ३६ वर्षीय लाल बहादुर भुजेल रहेका छन । उनीहरुबाट दुई वटा बन्दुक स...
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) समूहका दुई इन्चार्ज सहित पाँच कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन । पक्राउ पर्नेमा रामेछाप जिल्ला इन्चार्ज कुलदीप तामाङ, दोलखा इन्चार्ज यादव दाहाल, दोलखा जिल्ला सेक्रेटर...
एनजिओलाई प्रतिबन्ध लगाउँछौं : मन्त्री पण्डित
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारको अनुमतिबिना स्थानिय तहमा कार्यक्रम गर्ने एनजिओलाई प्रतिबन्ध लगाइने बताएका छन । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित स्थानीय तहको क्षमता...
रामेछाप । रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष गोबिन्द बहादुर खड्काको कारण बिरामीले सास्ती पाएका छन । लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा बस्ने ६२ वर्षीया सानुमाया खड्का सिकिस्त बिमारी भई गाउ...
मन्त्रीपरिषद पूर्नगठन हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल भइरहेको छ: अध्यक्ष प्रचण्ड
कास्की । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीपरिषद पूर्नरगठन हुने खुलासा गरेका छन । उनले मन्त्रीपरिषद पूर्नरगठनबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँग छलफल भइर...